Industrial premises For Rent in Dorchester, Dorset
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Indawo yemizi-mveliso Dorset EDorchester
UkuKhanya kweMveliso ukuYivumela eDorchester, eDorset
I-Poundbury Garage lishishini elide legaraji elisekwe kwindawo entle enendawo yokupakisha iimoto ezinokuba ngama-22 kunye nezinye ezongeziweyo kwisitoreji esingaphandle kwaye ke kucingelwa ukuba kufanelekile kulungiso lwegaraji kunye nokuthengisa.Offers zifunelwa ukuqeshiswa igcwele ...
Dorchester in Dorset, Dt1 2pg
Amanqaku aphambili avela kwi-approx 749 sq ukuya kuthi ga kwi-2687 sq ftUkuguquguquka kwesivumelwano sokuqeshisaUmvume wokuSebenzisa uHlelo lweB1 BusinessLocationImigangatho yenxalenye yeDorset Innovation Park ebekwe ngobuchule eSouth Dorset, malunga neekhilomitha ezili-17 ngasentshona yePoole. Indawo ihlala ngaphakathi koqhekeko ...
Dorchester in Dorset, Dt2 8zb
5,570 Pound £
Ukuqeshisa iyunithi yokufundela yanamhlanje efikelela kwi-1,760sqft malunga, ebekwe kwiMarbout Estate eGrove kwindawo ekulula ukufumana kuyo. Iindawo zakhiwe kwisakhelo sentsimbi nophahla olufakelweyo kunye nolwakhiwo lwezitena lujongile ngokufikelela ngocango lwekonsathi yomnyhadala. Usemgangathweni ...
Dorchester in Dorset, Dt1 1ya
Iyafumaneka ngokuqeshisa ngamacandelo ahlukeneyo endleko zeshishini e-Enterprise Park, ePiddlethinton. Irenti evela kwi- $ 1,500pa- i- $ 6,600paC okwangoku okanye esiza kubakho ngokufutshane ziiyunithi zilandelayo: Ubungakanani beRent XXUMXa 23sqft £ 1050pa6,600 26sqft £ 450pa4,200C20 3paXNXXNXXNXXXXXXXXXX
Dorchester in Dorset, Dt2 7ua
Ivenkile 6 yindawo yokusebenzela eyahlukeneyo kunye nesakhiwo sogcino esikufuphi nedolophu. Iindawo zakhiwa sisakhiwo esenziwe ngepaneli kunye neepaneli ezifakwayo, umnyango ovaliweyo wenqanawa kwaye siquka oku kulandelayo: -Gound 1050sqft (igumbi lokufumana indawo yefolokhwe kumgangatho wokuqala) .Mezzanine I-980sqft nge-seperate ...
Dorchester in Dorset, Dt1 1ew
UDorchester unokubhekisa ku: